नेपाल–भारत सम्बन्ध छिट्टै पुरानै मोडमा पुग्छः कोशियारी
काठमाडौं १४, फागुन । नेपाल(भारत प्रबुद्ध समूह भारत तर्फका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोशियारीले दुई देशको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ भएकाले सानोतिनो असझदारीले यसमा कुनै असर नगर्ने बताए । सोमबार रिपोर्टर्स
काठमाडौं । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको छ । नेपाल सन् २००६ देखि खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक, २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष ‘२०१७’ मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक
फुजेल प्रकरणको २० औं पेशी सुनुवाई हुँदै
चितवन । गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारीको हत्यासम्बन्धमा चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दाको पेशी आज परेको छ । चार वर्षअघि दायर भएको सो मुद्दामा पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको डेढ वर्ष भएपनि अन्तिम फैसलाका लागि तोकिएको पेशी पटकपटक सर्दै आएको छ । आजका लागि सो मुद्दामा तोकिएको पेशी
रहिनन् बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन भएको छ । हृदयाघातका कारण उनको गएराति दुबईमा निधन भएको हो । श्रीदेवीको जन्म १३ अगस्ट १९६३ मा तमिलनाडुमा भएको थियो । फिल्म इन्डस्ट्री भित्रका र त्यस बाहिरका व्यक्तिहरुले श्रीदेवीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन् । श्रीदेवीले सन् १९७९ मा मुख्य
नयाँ भाका, मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीको धारामा दशैंमा मात्र
काठमाडौँ, ११ फागुन -बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्णताको अन्तिम चरणमा पुगेसँगै राजधानीवासीका धारामा दशैँताका मेलम्चीको पानी आउने भएको छ । अर्बौं रुपैयाँको विशाल उक्त परियोजनाबाट मेलम्ची खोलाको पानी राजधानीका धाराबाट खस्ने प्रायः पक्का भएको हो । साथै सरकारले मेलम्चीको पानी राजधानीमा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको शुभकामना
काठमाडौँ, ११ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । शुक्रबार अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत् उनले यो सन्देश पठाएका हुन् । सन्देशमा नेपालको दिगो विकास र स्थायी सरकारका लागि शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना सन्देशमा
नेपाल भ्रष्ट देशको १२२ औं सूचीमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल १२२ औं स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० वटा देशहरूलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल सो स्थानमा परेको हो । नेपाल ९ स्थान माथि उक्लिँदै ३१ अंकसहित १२२ औं रहेको छ । गत वर्ष नेपाल
सामाजिक अभियन्ता डा.केसीकै तीन थरी जन्म मिति भाइरल
काठमाडौं । मेडिकल शिक्षामा वेथिति, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र नेताहरूको आचरणबारे पटक–पटक आवरण अनशन बसेर खबरदारी गर्दै आएका प्राध्यापक डा.गोविन्द के.सी नैतिक संकटमा परेका छन् । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा डा.केसीको जन्ममिति फरक–फरक रहेको कागजातसहित देखिएपछि
गुण्डा नाइके मनोज पुनको प्रहरी इन्काउन्टरमा मृत्यु
काठमाडौं ९,फागुन । गुण्डा नाईके मनोज पुन र उनका सहयोगी सोम आले प्रहरी इन्टाउन्टरमा मारिएका छन् । बुधवार बिहान रूपन्देहीको देवदहमा प्रहरीसँगको मुठभेडमा उनीहरुको मृत्यु भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । बिहान करिब ४ बजे देवदह–४ भवानीपुरमा गोली लागेर ढलेका दुवैजनालाई लुम्बीनी अञ्चल अस्पताल लगिएको
फोहोर गर्नेलाई अब छाडिन्न : मन्त्री पण्डित
काठमाडौँ । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरण फोहोर गर्नेलाई अब ठाउँका ठाउँ दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन् । वाग्मती बचाउ अभियान नेपाल र राधिका ट्रष्ट नेपालले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उनले वातावरण स्वच्छ राख्न निर्दयी कदम चाल्नका लागि आफू तयारी अवस्थामा
चितवनमा सवारी दुर्घटना: दुई जना वडाध्यक्षको मृत्यु
चितवन : चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–३ शान्तिचोकमा गएराति भएको सवारी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका खैरहनी नगरपालिकाका वडाध्यक्षको आज उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा आज बिहान १०ः१५ बजे खैरहनी नगरपालिका –४ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएको चितवनका प्रहरी
न्यानोबाट जोगाउन कम्बल वितरण
हुम्ला । अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानोबाट जोगानका लागि कम्बल वितरण गरिएको छ । सिमिकोट गाउँपालिकाले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेका ५६ जना वृद्ध वृद्धा र ४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यानोबाट जोगाउन कम्बल र कुर्सी समेत वितरण गरेको हो । जाडोबाट वृद्धवृद्धा
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेद्वारा राजीनामा
काठमाडौं ६, फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै उनले राजीनामा दिएका हुन् । गत साउन १९ गते उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका वाग्लेले आजै प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिँदै छन् । सरकारको आर्थिक सल्लाकारका
कल्पपुञ्जको उपन्यास ‘सञ्जीवनी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । आख्यानकार कल्पना श्रेष्ठ कल्पपुञ्जद्वारा लिखित उपन्यास ‘सञ्जीवनी’ लोकार्पण गरिएको छ । सर्वनाम थिएटरमा वरिष्ठ साहित्यकार भूवनहरि सिग्देल, त्रि.वि.का उपप्राध्यापक महेश पौडेल, प्रा. डा. रजनी ढकाल र लेखक राम लोहनी लगायतले संयुक्त रूपमा उपन्यासको विमोचन गरे । पुस्तकमा आवाजविहीन बालिकाको
सत्ता बार्गेनिङमा अल्झियो एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया
काठमाडौं : नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकताको खाका निर्माणमै ढिलाइ गर्दा पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भएको छ । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसके पनि नयाँ पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति जुट्न
विश्वकप खेल्ने खुसी लिएर फर्कियो क्रिकेट टिम
काठमाडौं : नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न सुरु गरेको झन्डै २२ वर्ष पुगेको छ । सन् १९९६ मा एसियाली क्रिकेट काउन्सिल ‘एसीसी’ ट्रफी खेल्दै सुरु गरेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ‘आईसीसी’ विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन एकसम्म आइपुगेको
गुणस्तरीय शिक्षा दीगो विकासको लक्ष्य : डा. वाग्ले
काठमाडौं । संघीयतामा शिक्षा : स्रोत र गुणस्तरमा सुनिश्चितता विषयमा चर्चा गरिएको छ । शिक्षा प्रत्रकार समूह १८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसर शनिबार राजधानीमा उक्त विषयमा चर्चा गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबैले शिक्षालाई दीगो विकासको रूपमा राखेको बताए । उनले
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन धादिङको अध्यक्षमा बसौला निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन धादिङको अध्यक्षमा ठानप्रसाद बसौला निर्वाचित भएका छन् । सदरमुकाम धादिङवेसीस्थित मदन–आश्रित भवनमा दुई दिन (फाल्गुन ३ र ४ गते) सम्म चलेको संगठनको १२ औं अधिवेशनले बसौलालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । अध्यक्ष बसौलाले पेसागत हक हितका लागि काम गर्ने बताउँदै
नयाँ छलाङ मार्ने स्थिती छैनःप्रचण्ड
काठमाडौं ४, फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसँग प्याकेजमा सहमति गरे
पूर्व सरकारका निर्णय खारेज हुनेःलालबाबु
काठमाडौं । नव नियुक्त जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने र देउवा सरकारका निर्णय खारेज गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले ‘एक दुई दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ,
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ओली १ वर्ष अघि नै प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा गम्भीर त्रुटि भएको छ । विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ वर्षअघिको मिति राखेर ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले राष्ट्रपति कार्यालयको
गर्भ तुहाएर छात्रा हत्या गरेको अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ
दाने बोहरा २, माघ । हुम्ला महावौद्ध विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी सिचुडोमा लामाको हत्या अभियोगमा प्रधानाध्यापक धनलाल रोकायालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हुम्ला जाने क्रममा उनलाई सुर्खेत एयरपोर्ट पक्राउ परेका हुन् । नाम्खा गाउँपालिका –४ स्थित कैलाश मान सरोवर चिन्ड्रेन अफ हुम्ला नामक
पशुपतिमा गाँजा प्याकेट भिडाउँदै जोगी
काठमाडौं १, फागुन । पशुपति क्षेत्रमा खुलआम गाँजा विक्रीवितरण हुँदा पनि प्रहरी मौन बसेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरको पारि राममन्दिर, मृगस्थली,गुहेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा गेरु ब्रस्त्रधारी जोगीहरु गाँजा विक्रीमा सक्रिय थिए । भारतको लखनाउबाट आएको बताउने परमेश्वर गिरी ‘ले लो बाबा की बूटी भन्दै गाँजा प्याकेट
को–को बने माओवादी सांसद ? १७ जनामा १ पुरुष
काठमाडौं १, फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फका १७ जना सांसदहरुको सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ । माओवादी सूचीमा १ जनामात्र पुरुष सांसद हितराज पाण्डे परेका छन् बाँकी सबै महिला रहेका छन् । माओवादीले बुझाएको सूची यस्तो छ– खसआर्य (महिला) रेखा शर्मा, पूर्णाकुमारी
हुम्लामा भारी हिमपात, तापक्रम माइनस १० डिग्री
दाने बोहरा २९, माघ । माघ महिनाको अन्तिम साता हुम्लामा भारी हिमपात भएको छ । शनिवार राति १२ बजे देखि परेको भारी हिमपात परेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ । हिमपातका कारण जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको तापक्रम माइनस १० डिग्री भन्दा तल झरेको सिमकोट बिमानस्थलका प्रमुख भीमदत्त पन्थले बताए । हिमपात हुँदा हिउदे
हुम्लाको महाबौद्ध विद्यालयमा एक किशोरीको रहस्यमय मृत्यु
दाने बोहरा, हुम्ला २९, माघ । हुम्लाको महाबौद्ध विद्यालयको छात्रवासमा बस्दै आएकी एक किशोरीको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । एसइई परीक्षाको तयारीमा रहेकी १७ वर्षीय सिचुडोमा लामाको २ साता अघि मृत्यु भएपनि परिवारलाई कुनै जानकारी नदिएको अभिभावको भनाइ छ । नाम्खा गाउँपालिकामा रहेको महावौद्ध याल्वाङ्गमा एसइई परीक्षाको
फेरि त्रिशूलीमा जीप खस्यो, सिँचाइ सचिव सहित ३ जना वेपत्ता
काठमाडौं २७, माघ । पृथ्वी राजमार्गको सलाङघाटबाट जीप त्रिशुली नदीमा खस्दा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्द यादवसहित तीन जना वेपत्ता भएका छन् । काठमाडौं आउँदै गरेको बा. २ झ . ३१४० नम्बरको गाडीमा शनिबार बिहान ३ बजेतिर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ । घटनाको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन् । चालक निराजन
यी हुन् ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री
काठमाडौं २६, काठमाडौं । नेकपा एमालेको भागमा परेका ४ ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष केपी ओली निकटका व्यक्ति हुँदैछन् । माओवादी गठवन्धनसँगको सहमतिमा एमालले पाएको प्रदेश नं १,३,४ र ५ प्रदेशमा ओली निकस्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । शुक्रवार प्रदेश नं १ बाट शेरधन राई र ३ बाट डोरमणि पौडेल संसदीय दलको
प्रदेश ६ बाट वाम गठबन्धनका आठवटै उम्मेदवार विजयी
सुर्खेत । बुधबार भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा ६ नं प्रदेशबाट आठैजना वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । महिला र खुलातर्फ निर्धारण गरिएको मतभार एक हजार १६२ क्रस गरी वाम गठबन्धनका खुलातर्फका कालीबहादुर मल्ल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र ठगेन्द्र पुरी तथा महिलातर्फका युटुल तामाङ, कविता बोगटी र नन्दा
चूडामणि शर्माको घर तोडफोड गर्ने विप्लव माओवादीका ४० जना पक्राउ
काठमाडौं २३, माघ । भ्रष्टाचार अभियोगमा पदमुक्त भएका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको बूढानिलकण्ठस्थित घरमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडको अभियोगमा प्रहरीले सो पार्टीका ४० कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ । मंगलबार